Ike nke ndị mmadụ gosipụtara na-ewu ewu maka BestCities Global Forum na-abịa na Bogota
Home » Na-agbasa News Travel » Ike nke ndị mmadụ gosipụtara na-ewu ewu maka BestCities Global Forum na-abịa na Bogota
Ndị ndu ga-enwe mkparịta ụka, nkuzi, na mmemme ka ha na-amụkwa banyere mpaghara na ọdịbendị nke Latin America na BestCities Global Forum ga-eme na Bogota.
Ndị ndu ga-enwe mkparịta ụka, nkuzi, na mmemme ka ha na-amụkwa banyere mpaghara na ọdịbendị nke Latin America na BestCities Global Forum ga-eme na Bogota na ọnwa na-abịa.
Onye Greater Bogotá Convention Bureau (GBCB) nọrọ na ya na BestCities Global Alliance, Nzukọ a ga-enyocha etu ijikọ aka na-enyere aka wulite obodo zuru ụwa ọnụ. Nzukọ a ga-eme ihe karịrị ụbọchị anọ, na-amalite na Disemba 9 na Grand Hyatt Bogotá wee gaa n'ihu na Ágora Bogotá Convention Center, naanị kilomita abụọ site na etiti akụkọ ihe mere eme obodo.
Isiokwu afọ a, Ike nke Ndị Mmadụ, na-eme ọpụrụiche pụrụ iche ndị mmadụ na-arụ n'ime mgbanwe dị ukwuu na ọganiihu n’ọgbakọ na ụlọ ọrụ mmemme. N'ime afọ abụọ gara aga, GlobalCities Global Forum lere anya na mmetụta nke ihe nketa na mkpa ọ dị iwulite àkwà mmiri ọdịbendị, agbanyeghị n'afọ a karịa mgbe ọ bụla, ndị mmadụ ga-abụ isi nke ozi ahụ.
Oge Bogotá ga-enye ndị nnọchiteanya ohere ịbanye n'ime ọrụ nke njikọ aka zuru ụwa ọnụ ma chọpụta ụzọ nke a ga-esi baara ndị mkpakọrịta ha na ihe omume uru. Site n'inweta netwọk zuru ụwa ọnụ na ịkọkọrịta ihe ọmụma n'etiti obodo ndị ha na ha na-emekọ ihe, nnọkọ ụbọchị anọ ga-akpali ndị mkpakọrịta iji mepụta nzukọ ka ukwuu, ka mma, ma nwee mmetụta.
Ọzọkwa, ha ga-enwe ohere ịkparịta ụka mmekọrịta dị oke ọnụ na ndị nwere oke mpaghara yana ndị mmekọ ibe 12 BestCities - Berlin, Bogotá, Cape Town, Copenhagen, Dubai, Edinburgh, Houston, Madrid, Melbourne, Singapore, Tokyo na Vancouver, na-emeghe ihe ọmụma ha.
Nke atọ nke BestCities Global Forum na-ewulite na 100% nzaghachi nzaghachi ziri ezi sitere na nzukọ abụọ gara aga na Dubai 2016 na Tokyo 2017; ma hụ ndị nnọchi anya ka ha jiri ohere a ga - anabata ebe afọ a ga - anabata Bogotá dịka obodo. Ejikọtara ọrụ dị iche iche nke ọdịbendị n'ime usoro ihe omume ahụ iji nye ndị bịara ya ohere ịchọta ihe nketa pụrụ iche na-akpali akpali nke Bogotá. Nhọrọ nleta na ebe a ga-enwe ohere iji nye ndị ga-eso ya ohere ikpokọta nghọta na obodo na ụlọ ọrụ ya.
Paul Vallee, Onye isi nchịkwa nke BestCities Global Alliance, kwuru, sị: “Anyị na - arụ ọrụ n’ọhịa ebe ndị mmadụ nọ n’obi ihe niile anyị na - eme - ha bụ isi ụlọ ọrụ a, obi dịkwa anyị ụtọ ịnabata ụdị mkpakọrịta na ndị nnọchi anya dị iche iche na ndị nnọchi anya afọ a na BestCities Global Forum. Bogotá.
“The BestCities Global Forum bụ ihe omume ọla edo anyị nwere ma ọ bụghị naanị igosipụta ihe ọmarịcha obodo nke Bogotá nwere inye, mana ha ga-ewetara ndị nnọchi anya seminar pụrụ iche na nke na-arụ ọrụ ga-amụbawanye nka ha na ha ga-enwe ike tinye aka na oru ubochi ha. Nakwa dị ka ọtụtụ dị iche iche dị egwu na-abịakọta ọnụ maka ịkekọrịta ihe ọmụma, ndị nnọchi anya ga-enwe ohere ịmụ ihe site n'aka ndị ọgbọ ma gbasaa netwọkụ ha.
“Ọ bụ ihe agbamume ịhụ ka ọtụtụ mkpakọrịta na-edebanye aha maka ọgbakọ a na Bogotá, naanị onye Latin America na-aga Alliance na Alliance. Nghọta ha ga-egosipụta ọrụ na-akpali akpali nke sitere na ebe anyị na-aga, anyị kwenyesiri ike na nke a ga-ada ụda na mkpakọrịta niile - n'agbanyeghị mpaghara ma ọ bụ kọntinent. "
Jorge Mario Díaz, Onye isi oche nke Board of Greater Bogotá Convention Bureau kwuru, sị: “Obodo dum nwere obi ụtọ ịme Global Forum Global Year. Onye ọ bụla nọ na-akwadebe ma na-etinye ihe niile ha nwere ike ime n’azụ iji mee ka Nzukọ ahụ bụrụ ihe ncheta na mmụta.
“Anyị kwenyesiri ike na onye ọ bụla nwere ike ịme mgbanwe dị mkpa, nke nwere ike ịkpụzi ọdịnihu ma mee mgbanwe dị mma. Ndị mmadụ bụ isi ụlọ ọrụ a, ụlọ ọrụ a bụ arịa iji nweta mmetụta sara mbara na nnukwu. Dị ka njikọ aka anyị chọrọ igosipụta ezi ike ndị mmadụ nọ n'ime ya ma kwenye na ọgbakọ a ga-enyere anyị aka ime nke a.
Obi dị m ụtọ na m kpọbatara nzukọ a a ma ama n'obodo anyị, na iso ndị bịara ya kerịta ọmarịcha ndị ọdịbendị na Latin America. ”
N'ịlaghachi n'afọ nke abụọ, Sean Blair, onye nwe ProMeet, ga-akwado ọgbakọ nke afọ a. Dị ka afọ ndị gara aga, ndị nnọchi anya ga-aga Nri Anyasị nke Onye nnọchi anya iji zute ndị ọgbọ, ndị nnọchi anya obodo na ndị isi kọntaktị na-enye ha ohere ịme mmekọrịta ma bulie netwọkụ ha gafee ụwa. Nzukọ ndị na-ewu ewu City Café na ohere ịkparịta ụka n'socialntanet ga-alaghachi ọzọ na ndị mmekọ 12 nke BestCities bịara.
Rick Antonson "ihe mberede Executive" na mbụ CEO nke Tourism Vancouver. N'ịga ụwa, dee akwụkwọ ise ma rụọ ọrụ ya na ụfọdụ n'ime ihe ndị a ma ama na Canada, Rick ga-eweta ụzọ ya na-esoghị ahụmịhe nke mmemme ahụ ka ọ na-atụle oge ya na Tourism Vancouver.
Lina Tangarife, Director nke Ọrụ Social na Social Alliance nke Uniandinos. Onye ọkachamara n'ọzụzụ nhazi nke ndị otu na-ahụ maka ndị ọrụ obodo, o jirila ike nke ndị mmadụ jiri ike mee ka ndị ọrụ afọ ofufo dị ike n'etiti ụlọ ọrụ, gọọmentị na ndị na-abụghị ndị gọọmentị.
Neyder Culchac, Onye Ntorobịa Na-eto Eto. Site na mpaghara a na-akpọ Putumayo na ndịda ọdịda anyanwụ Colombia, Neyder tolitere na esemokwu ma ọ kpebisiri ike ịhapụ nke a igbochi ya ime mgbanwe dị mma. Mepụta ụzọ gbanwere ndụ nke ezinụlọ 480 n'ime obodo ya, Neyder ga-ekerịta akụkọ ndụ ya ma kụziere ndị nnọchi anya ikike nke mkpebi.
Andrés Gómez, onye ọkachamara na Nkwukọrịta. N'ihe iri abụọ nke ahụmịhe na azụmaahịa na nkwukọrịta, Andrés lekwasịrị anya n'okwu ndị dị ka njikwa nsogbu, njikọta, okwu ọha na eze na ihe gbasara ụlọ ọrụ. Malite dị ka onye nta akụkọ, ọ na-eme atụmatụ ugbu a, na-emepe ma na-eme atụmatụ nkwukọrịta maka ụlọ ọrụ.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara BestCities ma soro na akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na BestCities Global Forum na izu ndị na-abịa nwe.ir.net.
Oge ano iji gbadaa na KISMET superyacht
Ọtụtụ puku mmadụ na-aga MBC Music K-Pop Concert na Guam